DEG DEG-Dowladda Sucuudiga oo ku dhawaaqday war ka farxiyey shacabka iy dowladda Soomaaliya kadib duqayntii Yemen. – Puntland News
Home 2017 March 20 Somali News DEG DEG-Dowladda Sucuudiga oo ku dhawaaqday war ka farxiyey shacabka iy dowladda Soomaaliya kadib duqayntii Yemen.
DEG DEG-Dowladda Sucuudiga oo ku dhawaaqday war ka farxiyey shacabka iy dowladda Soomaaliya kadib duqayntii Yemen.
March 20, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 1
One thought on “DEG DEG-Dowladda Sucuudiga oo ku dhawaaqday war ka farxiyey shacabka iy dowladda Soomaaliya kadib duqayntii Yemen.”
Ciise boostaale March 20, 2017 at 11:11 am · Edit
waa in magdhow laga bixiyaa dadka la xasuuqay iyagaa qaxootiya.